पानीको अभावका कराण स्थानीयहरूलाई सास्ती ! – इन्सेक
पानीको अभावका कराण स्थानीयहरूलाई सास्ती !
डोटी ०७६ वैशाख ३१ गते
गर्मी मौसमसँगै दिपायल सिलगढी नगरपालिका–१ तिखामा पानीको अभाव हुँदा यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले सास्ती भोग्नु परेको छ ।
गार्मी मौसमका कराण धारामा पानी आउन छोडेपछि स्थानीयहरूले सास्ती भोग्नु परेको ६५ वर्षीय कालु बिकले दुखेसो पोखे ।
धारामा थोरै पानी आउन थालेपछ बिहान ३ बजेदेखि नै लाइन बस्नु परेको स्थानीय ३५ वर्षीय विष्णादेवी खड्काले गुनासो गरिन् ।
उनले भनिन्–‘ढिलो गरी गइयो भने खाना पकाउन त के कुल्ला गर्नलाई पनि समस्या हुने गरेको छ । पानी कै लागि बिहान ३ बजेदेखि नै १५ दिनको बच्चालाई घरैमा छाडेर लाइनमा लाग्नु पर्ने अवस्था आयो । हाम्रो यो समस्या कहिले र कसले समाधान गर्ने हुन ? थाहा छैन ।’
सोही ठाउँकी ४५ वर्षीया अमृता नेगीले पनि पानी ल्याउनका लागि मध्यराति नै घरबाट निस्कनु पर्ने र नुहाउन र लुगा धुन डोकोमा लुगा बोकेर करिब १ घण्टाको दुरीमा रहेको गोदारे खोला जानु पर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
उनले भनिन्–‘राति नै घरबाट निस्कनु पर्छ । बाटोमा आवतजावत गर्न डर लाग्छ । महिनावारी भएको महिलालाई त झनै समस्या छ । तर, के गर्ने ? बाच्नका लागि भए पनि गर्नु नै पर्‍यो ।’
२ सय परिवारका लागि ०३३ सालमा गाउँमा खानेपानी योजना बनेपछि समस्या थोरै कम भएको भए पनि गर्मी मौसममा धारामा पाँच दिनमा एक दिन मात्रै पानी आउने गरेकाले वर्षौँदेखि समस्या झेल्नु परेको स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका अमृता खड्काले बताइन् ।
पानीको अभावका कारण प्रसूति सेवा समेत प्रभावित हुँदै आएको तिखा स्वास्थ्य चौकीकी स्वास्थ्यकर्मी निर्मला चौधरीले बताइन् ।
जिल्लामा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूमा पानीकै समस्या उठ्ने गरेको भए पनि यसको समाधान हुन नसकेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संस्था सिड नेपालका सौगात श्रेष्ठले बताए ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (जेठ २४ गते)
पछिल्लो २४ घन्टामा थप ३ सय २३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । २ सय ८६ जना पुरुष र ३७ जना महिलामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर…
०७७ जेठ २४ गते	काठमाडौँ
मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम (२०७७ जेठ २५ गते)